Podolski, meel walba oo aan ka ciyaaro go’aanka waxaa iska leh macalinka kooxda (sawirro)
May 15, 2012 - jawaab	Number of View: 1389Share
Xiddigga reer German ee Podolski oo dhawaan kooxda Arsenal ay kula soo wareegtay qiimo gaaraya £11million ayaa haatan kooxda si rasmi ah ugu soo biiray asagoona ka qayb qaatay fanaanadda cusub oo ay kooxdu ku ciyaarayso xilli ciyaareedka dambe.
26-jirkan ayaa dhaliyay 18 goals 29 kulan oo uu u saftay kooxdiisii hore ee FC Cologne ee horyaalka dalka Germany .
Waxaase xilligan soo baxaya warar sheegaya in ciyaaryahan Van Persie ay quudarraynayso kooxda ku guulaysatay horyaalka England ee Manchester City waase ay kawar sugaysaa wada hadallada ay haatan Arsenal u soo bandhigtay ciyaaryahanka wixii uu ka yeeli lahaa.
Sikasta oo ay tahay xiddiggii hore ee kooxda Bayern Munich ayaa soo qaatay fanaanadda cusub ee kooxda Arsenal ay ku safanayso xilli ciyaareedka dambe balse waxaa dhinaca kala horreynta wali hogaaminaya RVP oo aan wali kala caddayn sii joogitaankiisa Emirates xilli ciyaareedka soo socda.
Laakiin Podolski ayaa tilmaamay inuu ka ciyaari doono meel walba oo uu tababare Arsene Wenger ka geeyo afka hore si uu ugu dhaliyo goolal ka farxiya naadiga.
Waxaa hadaladiisii kamid ahaa, “Waxaan lasoo qaatay waqti ciyaareed aad u fiican naadiga Cologne, waxaan u ciyaaray si wanaagsan sida muuqatana iminka waxaan ka ciyaari doonaa ciyaaraha EURO 2012 taasoo aan kusoo ceshan doono kalsoonidaydii”.
Wuxuu kaloo yiri, “Markuu dhamaado xili ciyaareedka Euro 2012 waxaan ku biiri doonaa naadigayga cusub ee Arsenal waana inaan u dhaliyaa goolal fiican si aan naadiga ugu horseedo guulo”.
Markii aan joogay Cologne, waxaan ka ciyaari jiray afka hore iyo sidoo kale kubbad-qaabeeye, markii aan qaranka u ciyaarayana waxaan ka ciyaaraa dhinaca bidix. Runtii waxba kama qabo meel walba oo aan ka ciyaaro, laakiin go’aanka waxaa iska leh tababaraha oo go’aansan doona hadlakaan ka ciyaari doono,
SooyaalNews Network, Nairobi.
© 2012 Sooyaal News Media - All rights reserved. Designed Bye: Kalafoge.